Ao anatin’ny Randrantelo ihany: “Tanteraka ny fikasako handeha irery”, hoy i Farakely | NewsMada
Ao anatin’ny Randrantelo ihany: “Tanteraka ny fikasako handeha irery”, hoy i Farakely
Randrianarivo Fara no tena anarany. Noho ny fisian’ny Fara roa tao amin’ny tarika Randrantelo, lasa raiki-tampisaka ny hoe Farakely. Sary miraikitra amin’izay anarana izay koa ilay feo feno angola… Hiditra amin’ny dingana iray vaovao i Farakely. Resadresaka.
Gazety Taratra (*): Efa elaela ihany no fantatry ny mpankafy mozika ilay hoe Farakely. Azonao tantaraina fohy ve ny niandohanao tanatin’ny mozika?
Farakely (-): Ny ray aman-dreniko no tena nanao mozika taloha. Notarihiny sy nampianariny izahay zanany. Somary notereny mihitsy aza, satria teo amin’ny sivy na 10 taona teo aho tamin’izany. Tsy nisy niditra ny loha akory izany do, re, mi, fa, sol, la, si izany… Taty aoriana niditra tamina antoko mpihira, ka nahitako ny tsiron’ireo nianarana taloha tao.
Tany am-boalohany tsy nifankatia loatra izaho sy ny mozika ary tsy mba nihevitra ny ho lasa mpihira izany mihitsy aho tamin’izany.
* Nahita tsirony izany I Farakely teo. Nanomboka oviana moa no tena niroboka tanteraka ao anatin’ny mozika?
– Nandray anjara tamina fifaninanan-kira izay izaho sy i Laza. Nanomboka nitsapatsapa ny halalin’ny rano aho teo. Izahay mianadahy rahateo efa niara-notaizain’i dada tao anaty mozika, ary ohatra ireny antoko mpihira kely ireny mihitsy izahay tao an-trano. Marihiko fa efa ela izahay mianadahy no niara-nihira, ary nitohy tao anatin’ny antoko mpihira izany. Tsy nisy nahafantatra loatra anefa izay, fa tao anatin’ny tarika Randrantelo aho no tena fantatry ny maro.
* Fanontaniana manitikitika ny maro ity: I Farakely ve mbola ao anatin’ny tarika Randrantelo?
– Tena mbola ao mihitsy ao. Tao anatin’ny Randrantelo aho no tena nahita sy niaina ny mozika sy nilomano ao anatin’io tontolo io. Tena nitondra zavatra maro ho ahy ny tarika ary azoko lazaina fa nahazoako traikefa voalohany tao…
* Ny mahatonga ny fanontaniana mantsy, efa hitan’ny mpankafy ny rakitsarinao mandeha irery sy ireo miaraka amin’i Laza. Hanao ahoana ny tohin’ny tantara?
– Araka ny efa fantatry ny mpankafy, nirona amin’ny famerenana hiran’olona ny tarika Randrantelo, na manana hira vitsivitsy anay manokana aza izahay. Hafa ny ao anatin’ny tarika, saingy misy tanjona hafa mihitsy koa mba napetrako hizara mozika tiako manokana. Raha toa ka somary hira taloha no ataon’ny Randrantelo, ny ahy manokana iriko ho mozika somary tanora kokoa. Somary milokoloko koa…
Lasa tanteraka ihany izany fikasana handeha irery izany ankehitriny, ary ao anatin’ny fikarakarana izahay izao.
– Manam-baovao tsara hozaraina izany i Farakely?
– Eny. Hanao fampisehoana ao amin’ny CCEsca Antanimena aho, ny 18 aogositra ho avy izao. Seho voalohany iarahako amin’ireo mpankafy, sady fotoana hamoahana ny rakikira voalohany ihany koa. “Tafaray isika roa” ny lohatenin’io, araka ilay hira efa manomboka hain’ny rehetra iny. Eo am-pamaranana tanteraka izahay izao.
Nangonin’i Zo ny Aina Randriatsiresy